Somaliland: Jaamacadda Hargaysa Oo Bedeshay Shahaadadii Ay Hore U Bixin Jirtay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Jaamacadda Hargaysa Oo Bedeshay Shahaadadii Ay Hore U Bixin Jirtay
Jaamacadda Hargeysa ayaa shalay xaruntooda ku soo bandhigeen shahaado cusub oo casri ah oo ay adagtahay in la been abuuro.
Munaasibadda waxa ka soo qaybgalay maamulka jaamacadda iyo labadda ku-xigeen iyo kuuliyaha jaamacadda Hargeysa.
Ugu horren waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka akaadamiga jaamacadda“Dhamaanteen waxaynu ka warqabnaa jaamacadda Hargeysi waxay bilowday rifoon aad u balaadhan, oo dhinacyo badan taabanayay oo dhammaanteen ina saameeyay. Taasoo micnaha fulintiisa aynu ka qaybqaadanayay, si aynu u heli lahayn shahaado ka turjumi karta jaamacadda Hargeysa, shahaado aan la been abuuri Karin.”
Sidoo kale, halka ka hadlay Mustafe oo soo bandhigay shahaadadan iyo waxay kaga duwan tahay kuwii horre“Afarta shahaadadood dhamaantood waa wadda sharci, waanay shaqaynayaan, waxa isbedelay fiyuujariska, laakiin dhammaantood waa sharci. Su’aasha meesha taalla waxay ahayd, tanni maxay kaga duwan tahay kuwii horre si fudud looma koobiyayn karo
Kulanka waxa soo gabagabeeyay Gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Dr Maxamuud Yuusuf Muuse “Dunidu haddii ay horumar ku socoto oo maalin walba wax cusubi soo baxayo, waxa jiray mar gacan lagu qori jiray shahaadooyinka, waxaan arkay kuwii gacanta lagu qoray intii aanu haragu soo bixin isagoon teeba jirin oo maanta dad istaan shahaadooyinka gacanta lagu qoray. Marka waxaynu la soconayna marxaladda cusub iyo waaga cusub haddii aad la talaabsan kari waydo waagacusub dee waad ka hadhaysa caalamka. Marka maanta laga bilaabo waxaanu ku dhawaaqnay in la bedelay shahaadada jaamacadda Hargeysa.”